Meydka nin la dilay oo la soo dhigay waddada Soddonka ee Muqdisho | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Meydka nin la dilay oo la soo dhigay waddada Soddonka ee Muqdisho
Meydka nin la dilay oo la soo dhigay waddada Soddonka ee Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Meydka qof rag ah ayaa Sabtida Saaka ah lagu arkay qeybo ka mid ah waddada Soddonka, gaar ahaan inta u dhaxeysa isgoysyada Baar Ubax iyo Black Sea ee magaalada Muqdisho.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay, in si xun loo dilay marxuumkaasi, jirkiisana ay ka muuqdeen dhaawacyo halis ah, waxaana la sheegay in dilkiisa loo adeegsaday Toorey ama Mindi.
Wararka ayaa sheegaya, in qofka la dilay oo ahaa qof rag ah aan weli la qoonsan, waxaana meydkaasi la wareegay ciidamada booliska, iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in loo qaaday dhanka Xarunta CID-da.
Sidoo kale, ciidanka booliska ayaa waxay xireen waddooyinka soo gala goobta Meydka la soo dhigay, sidoo kalena waxa ay halkaasi ka sameeyeen howlgallo baaritaano ah.
Ilaa iyo hadda lama oga cidda ka dambeysay dilka marxuumka oo meydkiisa saaka lagu arkay waddada Socodka ee magaalada Muqdisho.
Meydka qof rag ah
Midni lagu dilay